Iro Ramangwana Rezvemagariro IYO Ramangwana Rekutengesa | Martech Zone
Nguva pfupi yadarika ndakave nemukana wekupinda ExactTarget Kubatana 2012, uye pakati pekukurukurirana kwepaneru, ndakanyanya kunakidzwa neiyo yakanzi Zvemagariro 2020: Chii Chichava Vedu? Moderated ne inimitable Jeff Rohrs, VP Kushambadzira Ongororo & Dzidzo kuExactTarget, yaisanganisira Margaret Francis, VP weSocial kuExactTarget, David Berkowitz, VP yeEmerging Media pa360i, Stephen Tarleton, Director weGlobal Channel & SMB Kushambadzira Bazaarvoice, uye Sam Decker, CEO uye Muvambi we Kukosha kweMisa.
Iyo pani yakanga iine kufunga kwekumutsa kufunga, uye kumwe kufungidzira, kana kosi. Semushambadziri, ndine pfungwa dzangu pachangu pamusoro pekuti ramangwana ringaita sei, uye pane punchline padhuze nekuguma kweizvi, asi ndima dzino teka dzinogona kubatsira kupa mamwe maonero.
Isu vatengesi dzimwe nguva tinokanganwa kuti madzitateguru edu ekutengesa aive zvikara. Ivo hapana chimwe chavaida kunze kwekusara vanokwikwidza nevatengi vavo kubva pamusika. Dai vangadai vakavavhima nemapfumo, mapakatwa, uye tomahawks, vangadai.
Kana isu tichifambira mberi kuburikidza nenhoroondo yezvakaitika zvekushambadzira, isu tese tinonzwisisa kunonoka kufambira mberi kwakaitwa, zvichitungamira kufunga kweye chaiyo meseji, chaiye munhu, nguva chaiyo. Kusvika padanho iro, isu dzimwe nguva tinogona kupembedza hunyanzvi hwedu nekutaura kuti tiri kunyatso kuitira mutengi nyasha nekupa basa rakakosha. Mushure mezvose, isu tine basa rekuita.
Asi ngatizvitarisei; chinangwa muna 2,000 BC chaive chekuti batsira vatengi vedu kuzadzikisa musika. Uye izvo zvichiri kudaro.
Kurumidza kuenda kumberi kune zera rezvinhu zvese zvemagariro. Zvemagariro matekinoroji akabata kambani America mu crosshairs. Pakarepo chikara chakave chisinganetsi. Isu takaita kune iyi nyowani chokwadi, uye isu takazviita zvakashata kune chikamu chikuru. Makambani mangani nhasi ari kutopindura zvakakwana kumibvunzo yakatumirwa pairi Twitter?
Usaita chikanganiso nezvazvo. Dai zvemagariro zvisina kuuya, bhizinesi renyika vangadai vasina kuchinja maitiro avo. Dai makambani ainyatsoda kuve akatarisisa vatengi, vangadai vasina kugadzira yavo vhezheni dzenzanga nzira? Tichiri kurarama mune ino kurwa kana kubhururuka nyika, uye makambani mazhinji ari kuyedza zvakanyanya kudzora iyi nyowani yemagariro, kuisimbisa.
Pane imwe nguva vazhinji munharaunda yekushambadzira vakabata zvemagariro, yaibatwa senge chirauro, gwayana rakasungirirwa pamuti, raishandiswa kukwezva shumba isingafungire kumusungo. Asi kune rimwe boka mukati merudzi rwedu, avo vanoona zvemagariro sedzisinganzwisisike, dzinza idzva risinganzwisisike rakadzungaira munyika yedu. Ehe, ivo vakasiyana, asi vanounza zvipo zvekushandira pamwe, zvekuteerera, zvemunharaunda, zvakagovaniswa.
Isu tichiri kuvhima, asi tinozviita semhuri imwe yakatambanudzwa. Isu tinotora izvo chete zvatinoda, uye tinogovana nyaya dzakakomberedza moto. Icho chisingaoneki, asi shanduko yakadzama yekuti isu sevashambadziri tinosvika sei kuhunyanzvi hwedu. Hazvireve kuti tinomisa mishandirapamwe yedu, metric, kana chikonzero chedu chekuva vashambadziri. Zvinoreva kuti tinovhima nerudzi rukuru, uye isu tinozivisa sarudzo dzedu kubva pane akasiyana maonero.
Saka pano tiri, sevashambadziri vanoshanda mukati meichi chokwadi chitsva, asi isu tichiri kuita dzimwe nguva kuzvibata sekunge tichiri munyika yekare. Ndeupi mutambi mukushambadzira Nzara Mitambo iwe uri? Zvino dzokera kumubvunzo wakabvunzwa nepaneru, uye mazano angu ekuti ungasangane sei nenyika isingazivikanwe yeramangwana. Uye mhinduro yangu yemutsara ndeiyi:
Rega kufungisisa nezve tekinoroji!
IInternet inzvimbo yemagariro, asi sezvo ruzivo rwuchizadza chaiko chiteshi chega chega, zvinowedzera kuomarara kuti zvionekwe. Vemangwana vatengesi venharaunda vanokonzeresa kukanganisa kwetekinoroji vanozopindura izvi, uye chinhu chisingazivikanwe chinonyatsovira zvichange zvichikanganisa sei? Vatengesi vatsva vedzinza vanonzwisisa kuti zvakaoma zvikuru kumasangano kufanotaura ramangwana remagariro matekinoroji. Ivo pachinzvimbo vanofanirwa kutarisa pane izvo zvicharamba zvichitsoropodza chero kukanganisika kunouya, ndokuti, maitiro anozoremekedzwa zvisinei nekushanduka kwetekinoroji.
Tags: 360ibazaarvoicekubatana 2012David berkowitzchaizvochaizvotarget kubatanaramangwana rekushambadziraramangwana rezvemagariroramangwana rezvenhaujeffrey rohresmargaret franciskukosha kwakawandasam deckerStephen taleton
Gumiguru 22, 2012 na6: 34 PM
Ruzivo rwakakura, runoratidza kuti kushambadzira, mune ramangwana kuchaenderana zvachose nesocial media sezvo boom musocial media iri kuitika nekukurumidza.